ဗမာအစိုးရ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသား (၅)ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
News » ဗမာအစိုးရ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသား (၅)ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွား	6
Posted by zaw gyi on Mar 15, 2015 in News |6comments
ဗမာအစိုးရ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသား (၅)ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကိုးကန့် -တရုတ် နယ်စပ် တလျှောက် တရုတ်စစ်တပ် တိုးချဲ့ နေရာယူထားသည့်အပြင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ခေတ်မှီ လက်နက်များ အသင့်နေရာချထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်က လာတဲ့ သတင်းများအရ သိရပါတယ်။
About zaw gyi
zaw gyi has written2post in this Website..
View all posts by zaw gyi →	Blog
Alinsett@Maung Thura says: ဇော်ဂျီ ဖိုဝင်သား စားချင်လိုက်တာာာာ
ဟွာလေ သတင်းတွေကို နေ့အလိုက်
ဘယ်နေ့မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့ ဆိုပြီး
တရက် တပုဒ်လောက်နဲ့ တပတ်စာ ပိုစ့်တပုဒ်လောက် စုစည်းပြီး တင်ပေးပါလား။
အကြံပေး တောင်းဆို တောင်းပန်တာပါ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: up to date တင်ချင်လို့နေမှာပါ
Kyaemon says: ကြီးတဲ့ကိစ္စငယ်စေ၊ငယ်တဲ့ကိစ္စပြီလပ်ပါစေ၊
တရုပ်ဘက်နယ်စပ်က လူ ၄ ဦး သေ ၉ ဦး ဒဏ်ရာရတဲ့
….Min Aung Hlaing said the Myanmar side understood China’s feelings and assured that the Myanmar side would send personnel to jointly investigate the incident with the Chinese side. Min Aung Hlaing also promised to properly handle relevant issues and hold relevant people accountable.
naywoon ni says: အင်း လက်​ပံတန်း ကိစ္စ​နောက်​ပိုင်း​မှေးမှိန်​သလိုဖြစ်​သွားတာက ​လောက်​ကိုင်​ကိစ္စပဲ ။ ကရင်​နဲ့လည်းဖြစ်​​သေးဆို ဒီရှုပ်​​ထွေး ဘယ်​သူရှင်းမှ လင်းပါ့မယ်​ ။
ဦးကြောင်ကြီး says: မှိန်သွားတာ မဟုတ်ဗျ.. စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ချီရေးက အသာလျှိုနေတာ.. အခြေအနေ မကောင်းမှန်းသိလို့။ ဖဘမှာ နေဝမ်းနီပရိုဖိုင်းတွေ ပျောက်ကုန်တာ ကြည့်ပါလား။ ဒင်းတို့ မြှောက်ပေးတာ တကယ်ထင်သူ ငတုံးတွေပဲ ကျန်တယ်..။
ခင်ဇော် says: ကိုယ့်ကြောင့် သေရတာ ၄ ယောက်တည်းပါ။
သူတို့ တရုတ်မုန့်တွေ တရုတ်စက်တွေ သွင်းပြီး ကိုယ့်ဆီက အဆီအနှစ်စားထားတာတွေကျ မပြောဘူးးး
အေးလေ ကိုယ့်ခေါင်ကမှ မလုံတာကိုးးး